Maxaa Iiga Kidhiish Ah ( Abdi-Shotaly)!
Sunday February 03, 2019 - 10:28:09 in Articles by Super Admin
kaas oo haad iyo habqale-ba ka haageene. Hada-ba waxan halkan idiin-ku soo gudbi-nayaa masaska ah, laba-iyo-luqun-madooba
kaas oo haad iyo habqale-ba ka haageene. Hada-ba waxan halkan idiin-ku soo gudbi-nayaa masaska ah, laba-iyo-luqun-madooba Marka aan is idhaaho talaabo hor u qaadba, shan talaabo baan dib u noqdaa, oo waxan is arkaa aniga oo siddii baabuur tiiro ka bixi kari-waayey dib isaga shubay buurta, halkii aan saaka ka bilaabay ayuunbaan arkaa anoo taagan, oo weli-ba halkii aan geer hore ka gelin lahaa, aan mid dambe u sii raaciyey iyo kii ciida ( Sand gear), oo uu iska-la kay laalaadiyey haadaan jilbis iyo abee-sooyin, ay ilaa dalqadda ii sii baneeyeen, intay labadii daan ii sii kala qaadeen, anna aan madax-madax u sii quluula-naayo, oo yaxaas afka ii sii kala waaxay, soo soco I leeyahay ( Waa Somalilande), ilayn wuxu bartay hilib-kaygan macaan ee aan walqi-naayo’e,
kaas oo haad iyo habqale-ba ka haageene. Hada-ba waxan halkan idiin-ku soo gudbi-nayaa masaska ah, laba-iyo-luqun-madooba-yaasha aan jabdhanka shiilan u ahay iyo sida la iigu soo halii-laayo, ilayn waxan ahay solay dhaylo ahe ( haddii aan ahay shicibka’e ):-
Waxan halkan saaka idiinku soo gudbinayaa, Riwaayad ay metela-yaan faanaaniin cusubi, oo la yidhaaho " Qalbi gudhan miyaa qosol lagu godlaa"? hadaba waxa aan hal-hal idiinku soo ban-dhigi doonaa, xidigaha metelaaya ama inoo dhigi doona Riwaayadan aan sre ku Carrabaabay, kuwaas oo ah Inta Xididadda u saartay Somaliland iyo mid waliba wuxuu ku hadlay, oo uu magaciisu ku hor qoran yahay, ee ku soo dhawaadda:-
*Hargay-saay ama sii jeeso ama soo jeeso, anigaad khasab iigu mehersan tahay, go'aan-kaan gooyaana aan cidi ka daba hadlayn, oo haysta Guurtiddii, sidaas waxa yidhi ( Saleebaan gaal).
*Laba-deena reerka yaw-weyn, oo ah waayeel ( Farmaajo).
*Haddii reer-ku kala dido, taloow yey u daran tahay( C/Rahmaan Cirro).
* Mar idage alle ha dago, laba jeer idaga-na, aniga hay dago, anigu intii aan bed-qabay garaama-hayggii ka qaataye, ee cirka haysku shareerto ( Siilaanyo ).
*Kaban-maayo nimaan aniga ahayni, oo waa anigaa ku jeeni-qaartay kiisha-diina barkaday ( waa Khasna-diiye), ee kulayl-ka la jiifa ( Sacad Cali shire).
*Ma dan baan ka lee-yahay ,hada haysku dareerto, mar hadaan ku hor kaajo keligay ( asakriga fuq cir u taag).
*Sidaa maysku qabnaa mise waa qasanaa ( Gaafaadhi).
* Beeni maxay tari bora-maan ka imee ( Saylici).
* Wado halaq in maray baa waabay ka leefayee warma-haaga afayso ( Axmed Muumin Seed),
*Dhaaxaan nin hana-qaad is biday, soo hogaan baraye, ee oday haka dhicin salaa-madda ( Wasiirka War-baahinta),
*Waxaw halis ah badaw hay-jad galay, inu halaa-baaye ( Cali Gurey),
*Faysalaw mid horaa i-damqay, oo dooda-haa ma galo ( Ramaax),
*Ninka duday distoor-kiyo sharciga diinti ka caroowye ( Maxamuud Xaashi),
*Shirka annaa Boorame geeyey, oo aan cidna wax iskaga tirinayn ( Ina Cabdi-dheere).
*Waraabe ciila haw qabin, calala haw tuurin, baynu ku shayqayn doonaa ( Golaah wasiiro ku sheega Somaliland)).
*Oo xagaan ku hadhaa heegadda haysku shareer-to, ee dab miyaan huriyo bal halkay isla gaadho ( Buurmadaw).
*Ma anigaa qadaya, qiiqa waan arkayaaye, qarqarka aan ka lusho, oo waa ciddii ka qax-waysa ( SSC)
*Qaxar baan dhigayaa, qayla-daydda dhegayso iyo qorsha-haan degayo ( Fadalka Booliiska).
*Ma cid bay iga horaysa, halgankii berriggii, halyey baan ka ahaaye ( Geenyo Shaaxiamn ).
* Dhalan-teed aan soco-naynin iyo ma dhegaysto war-kaase, ee kulmiyaw ka dhaqaaji ( C/Rahman Cirro).
* Waxan ahay nin doorkii, ma anigaa nin daba-gala, oo durbaan lay garaacaa? ( Jamaal Cali Xuseen),
*Hadaan qaw-lalka buuxsho, oon qurus-kayga ka qaato, ma cid bay qaba-naysa ( Ina Aw siciid),
*Wadaada-du beerka xaydha leh way cunaane, ilaahay maa ka yaab-taan oo na siisaan ( Baashe Moorgan).
*Inta nabadi joogtaa nin-ba laba nin leeg-yahay, ee naqa mayska daaq-daan ( Cabdi-waraabe).
*Mar hadaan ka gabayey, oon kadab-kaygi ka qaatay, maxaa iiga kidhiish ah ( Komishanka),
Akhriste-yaal halkaas bay ku dhamaatay Riwaayaddii la magac baxday "Qalbi gudhan miyaa qosol lagu godlaa"?
ee ay soo qaban-qaabiyeen Hoobaladda waaberi, koox-deeda loo yaqaan Xununal-qarqoosh.
N.B. Ma anigaa midiyo la qarshaa laygu qali-doono?
Qore :- bdi-shotaly.